İzmit Köy Yolları Modernleşiyor – RayHaber | raillynews
[13 / 01 / 2020] Minister Turhan: 'A Ga-Emezu Ọrụ Kanal Istanbul Dị Ka 2026'	34 Istanbul
[13 / 01 / 2020] Edere ndị ọrụ TCDD na Ankara YHT Ọnwụnwa Ọnọdụ ọnwụnwa edepụtara ahapụrụ iche	06 Ankara
[13 / 01 / 2020] Ọrụ ụgbọ okporo ígwè mba na TÜVASAŞ	54 Sakarya
[13 / 01 / 2020] A ga-eme nnyocha maka Sakarya Nostalgic Tram!	54 Sakarya
[13 / 01 / 2020] Ekpebidola karabọchị karagbọala Ankara-Sivas YHT	06 Ankara
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliIzzọ Izmit Village na-emeziwanye
02 / 12 / 2019 41 Kocaeli, Akụkọ Asphalt, General, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
izmit bay ụzọ na-moderniing
Izzọ Ndị Izmitl Izmit na-eme ugbu a; Obodo Kocaeli, nke jigidere ezigbo mkpa maka ọrụ ụgbọ njem, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-arụkwa ya na ịrụzigharị ya na obodo. N'ime ụzọ a, a na-ebupụ ụzọ mgbapụ n'obodo Gedikli na Zeytinburnu nke mpaghara Izmit ndị okporo ụzọ ha mebiri n'ihi ọrụ akụrụngwa. Site na ọrụ nkwenkwe ụgha ndị a rụrụ, nkasi obi nke ụzọ Gedikli na Zeytinburnu mụbara ma nwekwaa afọ ojuju nke ụmụ amaala.
Ihe omume nke Ngalaba Sayensị nke obodo Izmit na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ha n'okporo ụzọ obodo, mpaghara Gedikli Village Mancarcı chọrọ. N'ime ogo ihe omumu a, atumatu 500 nke ihe PMT na tọn ton nke 6 dika okporo uzo ogologo xNUMX mita na obosara 470.
950 METER ROAD ASPHALTED NA ZEYTINBURNU VILLAGE
Mpaghara Zeytinburnu Villagevocilu na-arụkwa ọrụ na Ngalaba Sayensi, ndị otu, ogologo 950 mita na obosara obosara nke 6 arụwokwa ọrụ na-enweghị atụ. E dobere tọn ton 90x nke ihe PMT na puku tọn 120 tọn asphalt.
Ụzọ Izmit na Ụzọ Kandira
Ebe obibi Bursaray na-agbanwe
Ogologo ụgbọ okporo ígwè na-emeziwanye ihe
New York Metro na emeziwanye
Mgbanwe na Manisa
Nzukọ Ọhụụ Gulf crossing na Connection na SAU
Oge nkwenye: Mmelite nke okporo ụzọ Ọrụ dị na Polatlı-Konya High Speed ​​Line na…
Polatlı-Konya YHT Nrụpụta nke okporo ụzọ ọrụ dị adị na ọrụ ọhụụ…
Mara Ọsịsa: A ga-arụ okporo ụzọ (Erzincan Erzurum Kars Stations…
Gebze-İzmit-Köseköy ga-emechi okporo ígwè okporo ígwè na 17.12.2011 n'ụbọchị
Ogige ụgbọ okporo ígwè, YHT laghachiri n'ọdụ ụgbọ mmiri!
Mitzọ Ndị Izụrụ Izugbe
Akwụkwọ ikike na obodo
Okporo ụzọ obodo Zeytinburnu
Nounma ọkwa ọkwa: Mwube nke mkpọda na hectometer Plate na mpaghara DBM 22
Mara n ’Obi Ọmịiko: A ga-ewu Onwegigide na Oke Osimiri na Arifiye Pamukova Line
Nkwupụta nke Mgbapụ: Mmepụta Nri nke Haydarpaşa Ọrụ Ndị Ọrụ Ọrụ
Mụ nwanyị na-enwe obi ụtọ na Erciyes Ski Center
Soup Na-ekpo ọkụ Maka Studentsmụ akwụkwọ EGO
Ebe ntanetị nke Dieci dị na ntanetị nwere Nhazi Ọhụụ
Hyundai Assan amalite Mmepụta nke New i10
Otokar ga-ewebata Kent Electra, ụgbọ ala eletrik nke obodo ahụ
Egosipụtara Jeep Koodu ọkụ eletrik 2020 na CES 3!